IZINZUZO EZIKHULU ... Izimfihlo Zembuliwe Manje! | Martech Zone
IZINZUZO EZIKHULU… Izimfihlo Zembuliwe Manje!
ULwesine, April 23, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Cha, isiza sami asihlaselwanga ngumgaxekile. Nanamuhla uDoug ubhala lokhu okuthunyelwe futhi ngikwenza ngokuthanda kwami.
Wake walishaya ikhasi lewebhu elikhangisa ukuthi bazodalula zonke izimfihlo zezinkinga ofuna ukuzixazulula? Leli khasi liqala ngemibhalo ethile ebhalwe ngendlela emangalisayo, ekumunca kuyo, izithombe ezinesibindi, ubufakazi obunamandla… ukudonsela phansi ekhasini uze uphakamise ngomlingo ikhadi lakho lesikweletu ephaketheni lakho.
Lapho ngisebenza ebhizinisini leposi eliqondile, ngangibuka uPat Coyle ikhophi ende izincwadi ezizuze amazinga okuphendula amahle. Ngiyakholelwa mngani nombhali wamakhophi U-Erik Deckers ungumlandeli nombhali wekhophi ende futhi. Kungakhathalekile ukuthi ungubani umkhiqizo uqobo, ithalente lalaba babhali liyamangalisa… ucishe uluthiswe ingqondo ngasekupheleni kwencwadi.
Kwabanye abathengisi, lolu hlobo lokubhala amakhophi luyenyanyeka futhi, kwesinye isikhathi, bakholelwa ukuthi luyakhohlisa. Ngeke ngisho ukuthi ngiyavuma. Ngikwazi ukuyibona kalula uma ngiyibona, kepha kwesinye isikhathi kunzima ukufulathela. Ngilandile (futhi ngakhokha) ama-ebook ambalwa ngesikhathi sami - futhi ngikholwa ukuthi ngiyitholile imali yami.
Abaningi balaba bantu banjalo abathengisi bemininingwane, amasondo futhi asebenza kuma-ebook, ama-webinars nezinkomfa. Bavula ukunambitheka okuthile okukungenayo futhi kungakubiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi ngesikhathi ushiye ingqungquthela yabo.
Izindleko zihlobene, kepha… uma unethalente lokuphromotha lalaba bantu futhi uzimisele ukubeka konke onakho kukho… ungenza imali eningi. Njengoba ngibuka ukufundwa kwebhulogi lami namasayithi, ngingahle ngiyeke imali eningi ngokungalandeli ezinyathelweni zikaJoel futhi ngibe ngumkhangisi wolwazi nami.
Iningi labantu lihlobanisa ukuba yi-Internet Millionaire ne-dot-com craze yangemuva kweminyaka yama-1990's… Kepha iqembu elincane lamaPhayona Wokumaketha nge-Inthanethi babethula imali yabo ngokuthula ku-inthanethi ngaphambi kwanoma ngubani uYahoo'd noma uGoogled igama elithi "ukwenza imali nge-inthanethi". Abaningi babo bakha imibuso yabo ngamagama amane alula kepha anamandla amakhulu… Chofoza LAPHA uku-oda.
UJoel Comm's Umthengisi Ohamba phambili waseNew York Times, Chofoza LAPHA uku-oda, ayiyona umbhalo wokumaketha noma incwadi yokuthi ungaba kanjani usozigidi. Esikhundleni salokho, ukubukeka okuthakazelisayo emlandweni wokuqala we-Intanethi nabantu abaqale bazuza lapho - abanye babo ongakaze uzwe ngabo. Njengoba UMark Joyner uthi, "Nali iqembu elincane labantu, ekuqaleni kwenguquko kwezobuchwepheshe, elibone ithuba futhi balibamba."
Kunabakhangisi be-Intanethi nabathengisi be-Intanethi. Ngiyazi ukuthi zizwakala ngendlela efanayo, kepha imvamisa iqembu elilodwa libuka elinye njengengane yangasese yesikole ethuka othile ovela esikoleni somphakathi. Kulokhu, noma kunjalo, kuvame ukuba yingane yesikole yomphakathi ewinayo… ihambisa inzuzo enkulu ngezindlela ezingejwayelekile. Kuzwakala sengathi akukhuphukanga naphezulu… kepha ukubandakanyeka konke kungokuzithandela futhi kuyimboni enkulu impela.
Angibabukeli phansi nhlobo laba Bathengisi be-Intanethi. Ake sibheke umlando futhi, ngokwesibonelo, qhathanisa UCorey Rudl (RIP) ukuze Pets.com, kuyacaca ukuthi ngubani owayenamandla okuhlala nethalente. Kuyacaca futhi ukuthi ngubani omoshe imali yabo futhi wasaphaza imali yabo. Ngishawa uvalo ngamathalente alabosomabhizinisi ekukhuliseni amabhizinisi amangalisayo, ukuguquguqula izimoto komunye nomunye (kunokuncintisana), ukululekana nokufundisana ngalokho okusebenzayo nangokusebenzisa ngokungenaphutha wonke amathuluzi abanakho ukuhlola nokukhiqiza ikhophi okuguqukayo.
Angiyena umthengisi wezimakethe ohlekisa ngalabo somabhizinisi, ngicabanga ukuthi ukuqina kwabo nezindaba zabo kuyathakazelisa. Incwadi kaJoel yindaba elandelana yabathengisi be-inthanethi abaphumelele kakhulu. Izindaba zabafana abangalali ubusuku bonke bazi kahle ubuciko babo, balale emsebenzini, baxoshwe bese beba ngosozigidi zikhuthaza kakhulu noma yimuphi usomabhizinisi. Ukufunda izindaba kwenza igazi lakho lishaye! Isilinganiso I-CMO noma uMqondisi Wezokumaketha angafunda okuningi kuleli qembu.
NgoLwesibili ebusuku ngiqedile Ama-Super Crunchers endizeni eya eSan Francisco futhi ngaqeda Chofoza LAPHA uku-oda namhlanje ekuseni endizeni ebuyayo - wonke amakhasi angama-279. Kufundwe kahle - qiniseka ukuthi uyakucosha uma uthola ithuba.
Ngize ngizwe i-ebook esikhathini esizayo esiseduze!
Tags: ukubuyekeza incwadichofoza lapha ukuze ulandejoel comm
I-Analytical + Creative = Impumelelo Yemidiya Yomphakathi
Ama-URL alula eSizeni Sakho ane-.htaccess
Ngo-Apr 24, i-2009 ku-10: 33 AM
Okuthunyelwe okuhle, Doug! Ngingasho ukuthi lezo zincwadi “zikuqhuqhile” ngempela. Futhi into ukuthi, ngiyazi impela uhlobo lwekhophi obhekisele kulo. Ngangifundiswe kancane kuyo ngenkathi ngisakhula enkampanini yezikhangiso eqondile lapho nganginenqwaba yamasampula engizohamba kuwo, ukuze ngithole ugqozi LWAMI lwephakheji lami leposi elilandelayo, kanye nencwadi enkulu emnyama yensizwa endala obekufanele abe yisikhulu ngendaba yokumaketha ngqo. (Ngangiyingane emuva ngaleso sikhathi, ngifunda nje ngezinganekwane ze-DM ezaqamba izinto ezinjengeJohnson Boxes ne-snap-paks.) Noma kunjalo, ngaphonselwa inselelo yokuthi ngibhale incwadi enamakhasi ayi-6 ngithengisa okubhaliselwe kuma-Consumer Reports ("kwakuyincwadi ende" umqondo). Ngiyibhalile, kepha iklayenti alizange liyithumele. Ngangisafunda ubuciko bami ngaleso sikhathi, futhi impela kwakuyinselele.
Ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala ukufunda izincwadi zokuphendula eziqondile, ngingakaze ngithole okuningi kwazo ngokwami ​​ngenkathi ngifunda esikoleni esiphakeme nasekolishi (ngangiyincwadi yombhali yokubhalela ababhalisile phesheya kwezilwandle, abangane nezihlobo), ngangicabanga ukuthi izinhlamvu zizwakala njengezivangeli.
Yebo, i-ebook izwakala imangalisa! Kwenze!
Ngo-Apr 24, i-2009 ku-8: i-28 PM